Arts & Humanities » နှလုံးသားကိုလေးပေါ်တင်၍ ပစ်သောအခါ (အောင်သင်း)	27
အလင်းဆက် says: ဘွားးးး ခနဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အေးး.ဘွားခနဲဘဲ ဒညင်းဝက်ရေ :P
Mike says: .တော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့စကားတွေပဲ
Shwe Ei says: -Title က စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ခည.. သများ..စာကြည့်တိုက်က ငှားဖတ်မိပီး.
pooch says: တခါတလေ ဘာဆို ဘာမှ ကို ပြောချင်စိတ်မရှိတော့အောင်ကို စိတ်ကုန်တယ် ရွှေအိ PK ကြည့်ပြီးပလား ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့် အခု တို့အားလုံးဖြစ်နေတာနဲ့ အကုန်ကွက်တိပဲ
အဲ့လို အယူသည်းတဲ့ နိုင်ငံတခုကနေ ဒီလို ကားမျိုး ရိုက်ရဲတာ ချီးကျုးတယ် အဲ့အတွေးအခေါ်ကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ လိုတယ် တို့တွေ ဆီမှာ ပြောတာနဲ့တင် ထောင်ထဲ ဆွဲသွင်းသွားတာဆိုတော့လေ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ (ဦးကြောင်စကား ငှားပြောမယ်) အဖက်မလုပ် လဖက်သုပ် သုပ်စားရင် ကောင်းမလားပဲ လို့ :mgreenn:
Shwe Ei says: ..ဟုတ်ကဲ့..အမပုရှ်..သများ အိုက် ပီကေ ကြည့်ချင်လွန်းလွန့် အခွေဝယ်ထားရုံရှိသေးတယ်..သူများကို ငှားလိုက်ရလို့..ကြည့်ရသေးဝူး..ကြည့်ဖစ်အောင် ကြည့်ပါမယ် ..အခု ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာတွေ ရှယ်ဖြစ်တာလဲ..အပြောရဲတာရယ်..ခေတ်အမြင်က ကိုယ့်ထက် ..အဆပေါင်းများ စွာ သာတယ်ရယ်ကို သဘောကျလို့ ရှယ်လိုက်တာ..
..အာ့ကျောင့် လဖက်သုပ်စားရင်း..စာဖတ်မယ်လို့ စိတ်ကူးပါတယ် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ( လောကတွင် စည်းစိမ်အရှိဆုံးမှာ အနည်းငယ်နေမကောင်းနေရခြင်း ဖြစ်သည်။) ဆိုတာကို
တခါထဲဖတ်ရုံနဲ့ စိတ်ထဲစွဲသွားစေတဲ့ စာမျိုးပေ့ါ။ အခုလို လိုတိုရှင်း Gist ထုတ်ထားရေးတဲ့ စတိုင်ကိုလည်း ကြိုက်သွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အန်တီ မမရေ..တခါတလေစဉ်းစားမိတယ်…စာကောင်းတွေကို ဖတ်ရုံဖတ်ပြီး..သိနေရတာထက်…
-ကိုနဲ့ဝါသနာတူ မိတ်ဆွေတွေကို ဝေမျှပြီး အတွေးအမြင် ဖလှယ်ရတာ..ဆွေးနွေးရတာ ပိုပြီး..အရသာရှိမယ်ထင်တယ်လို့.. -အခုဘဲကြည့်လေ..အန်တီမမ မှတ်မိနေတဲ့ စာသားကို..ကျနော်လဲ တော်တော်လေး သဘောကျနေတာခြင်း တူနေပါရော… :P
Iris says: ဟုတ်​တယ်​ပုခ်ျ​ ​တော်​​တော်​​ကောင်းတဲ့ကုလားကားလို့သတ်​မှတ်​ထားတယ်​။သူ​ပေးချင်​​တာ​လေး​တွေ​တော်​​တော်​သ​ဘောကျတယ်​။ ကုလားကားမကြိုက်​တဲ့သူ​တော်​၂ခါပြန်​ကြည့်​ဖြစ်​တယ်​။ သူငယ်​ချင်း​တွေကို​ပြောပြပြီးသူတို့ကြည့်​​အောင်​လို့ အတူတူပြန်​ကြည့်​​ပေးတာ။မ​အောင်​မြင်​ပါဘူး.အိပ်​​ပျော်​သွားတယ်​တဲ့။ ​မောင်​​လေးကို​တော့မရအရကြည့်​ခိုင်းပြီး သူ​ပေးချင်​တာ​တွေ​ရောကိုယ်​​ပြောချင်​တာ​တွေ​ရော​ပြောလိုက်​တယ်​။
Mr. MarGa says: မြတ်စွာဘုရား….
Shwe Ei says: -သများတို့ မြန်တျန့်ပြည်မှာလဲ..ဆင်ဆာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး…တန်းမ၀င်တဲ့ -ကားတွေ လျှောက်ရိုက်နေမဲ့ အစား…ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာ အပိုလုပ်မိနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို -မီးမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး ရိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော်..(နှစ်၁၀၀၀ကျိန်စာ…လွတ်လိုလွတ်ငြား) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: -သများတို့ မြန်တျန့်ပြည်မှာလဲ..ဆင်ဆာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး…တန်းမ၀င်တဲ့ -ကားတွေ လျှောက်ရိုက်နေမဲ့ အစား…ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာ အပိုလုပ်မိနေတဲ့ -အကြောင်းအရာတွေကို -မီးမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး ရိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော်..
Shwe Ei says: -ဟုတ်တယ် ကောင်းကင်ပြာရေ…အတုယူတာလိုလို အတုခိုးတာလိုလိုနဲ့ တိုက်ရိုက်ကူးနေချနေကြတာ ဘယ်နေရာက -ကူးချတယ်ဆိုတာမျိုးပါ
Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: မင်းအုပ်စိုး ပြသနာမတက်ခင်က အဲ့ဒီဆင်ဆာအကြောင်းရေးထားတာလေး အတော်မိုက်တယ် အာ့လေးဖတ်ပီး
လေးစားနေတုံး နောက်နေ့ ကွိသွားဒါဘဲ သများကတော့ အနဲငယ်နေမကောင်းဖစ်ရင်တောင် ချစ်သူနဲ့တွေ့ရမှဖစ်ချင်ဒယ် ပျောရင်းလွမ်းထှာ :P
ရှယ်တွေစုပေးထားလို့ ကျေးကျေး အာဘွား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -မင်းအုပ်စိုး..လား??
-သာမီးက ခြစ်သူအကျောင်းပျောရင်…မမဖြင့် ဘာပြောရမန်း မသိဝူး..ဖစ်.ဖစ်သွားဒယ် (အခုထိ တွဲမြင်ပေးလို့ကိုမရသေးဒါ)
Wow says: ဖတ်ပီးရင် စာအုပ်ကော၊ လက်ဘက်သုတ်ပါ ငှားနော် ကျီပြာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အိမ်လာလည်ရင်..ငှားပါမယ် :P
မြစပဲရိုး says: ရာဝဏ ခမျာ တော့ လေးတင်ချိန် မယ်သီတာ ရဲ့ အကြည့် ကို ဘာသာပြန်ပြီး အားယုတ် သွားရှာသတဲ့။
Shwe Ei says: -အိုက် ရာဝဏက ရလိုမှုတစ်ခုအတွက်..အင်အားသုံးတာကိုးး. အရီးရဲ့..
-စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို အသုံးချတာမဟုတ်တော့..မိန်းမတယောက်ရဲ့ အကြည့်တချက်နဲ့တင်..အားတက်လွယ်..အားကျလွယ်ဖစ်တာပေါ့ .. အာ..ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာမှတ်စုလေးတွေ ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ…
Shwe Ei says: -အူးလေးကတော့ လုပ်ဘီ..
-မွနှင်းရေ..ဒီအူးလေးကို လက်ချာလေး နဲနဲ လောက် ပေးလိုက်ပါအုံး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ဆရာအောင်သင်းကနှလုံးသားကိုလေးပေါ်တင်ပြီးပစ်လိုက်တာ
Shwe Ei says: -ဆရာအောင် သင်းရဲ့ မျိုးဆက်သစ် တိုးတက်ရစ်ဖို့ စီးရီးကို ကြိုက်တယ်ခည. -ခလေးတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေရတဲ့ လူကြီးမိဘတွေ ရော ဆရာ -ဆရာမတွေရော..ဖတ်သင့်တဲ့စာတွေမို့လို့ပါ…
padonmar says: ချွေအိလေး
Shwe Ei says: -အာတီဒုံရေ..ကြိုက်တယ်ဆိုလို့..ကျေးကျေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: အလေးစားရဆုံး အကြိုက်ဆုံး ဆရာကြီးရဲ့ အကောင်းဆုံး Notes တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ
Shwe Ei says: -ဟုတ်ကဲ့..ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာအုပ်တွေလဲ ၀ယ်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..ဒါက စာအုပ် -အညွန်းဘဲမို့လို့ .. စာအုပ်ထဲမှာ ဒီထက်ပိုပြီး အနှစ်ပါတဲ့ စာသားတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ..